Nyeredzi - Meteorology paNet | Network Meteorology
Iyo nyeredzi Iyo inyaya inonakidza nyaya isingaregi kutishamisa mazuva ese. Iyo sainzi inodzidza nyeredzi, mapuraneti uye zvese zvakasikwa mukati. Its etymology zvinoreva "Stargazing." Iyi mitumbi yekudenga inoonekwa zuva nezuva kubva paNyika nevazivi venyeredzi uye vesaenzi vanotsvaga kutsanangura kuumbwa kwechisiko uye mashandiro ayo.
Kune nzira dzakawanda dzekucherechedza kuziva mamiriro, kuumbwa uye kufamba kwemitumbi yekudenga. Mazhinji ezvidzidzo zvinoitwa anotarisana nemabatiro avangaite pasi redu.
Iwo echinyakare mabudiriro akatsanangura nyeredzi nemimwe mibvunzo ine chekuita nengano, vamwari uye zvitendero zvezvitendero. Izvi zvaikonzerwa nenzendo refu dzaiitwa. Nekuda kwekufambira mberi kwetekinoroji uye ruzivo, zvinozivikanwa kuti Nyika ingori imwe yemuchadenga muviri uye kuti isu hatisi pakati pezvose. Zvese zvakasikwa hazvina mugumo uye zvakaumbwa nemakwara enzou, zuva, nyeredzi, mamwe mapuraneti, mwedzi, meteorite, guruva, nzira, uye maasteroid.
Teresikopu yakapihwa na Galileo Icho chaive chimwe chezviridzwa zvinonyanya kubatsira muAastronomy. Nhasi, pamwe nekufambira mberi kwetekinoroji, mhinduro dzakajeka dzinogona kupihwa nezve mavambo epasi uye zera remitumbi yekudenga Nyanzvi dzenyeredzi dzakapa ruzivo rwakakosha kusainzi repasi redu uye vanoramba vachishandisa nzira imwechete yekutarisa.
Ivo vanowanzo gamuchira rubatsiro rwemari kubva kuhurumende, mari yavo inodhura inotsigirwa nemasangano anoona nezvekutenga nekugadzirwa kwezviridzwa zvinowedzera zvemberi uye kubhadhara uye dhizaini yenzvimbo dzakaomarara dzekutsvagisa dzakadai se: NASA.
Muchikamu chino unogona kunakidzwa uye kudzidza pamusoro pezvose zvakasikwa uye kwayakatangira. Kubva pakushanda kwenzvimbo dzinotenderera zuva, kune hunhu hwese mapuraneti, ichipfuura nemumakwara akanyanya kukosha uye ichidzivirira maburi matema. Usapotsa mashiripiti eAastronomy uye ubatanidze ruzivo rwepakati!
Mufananidzo wegomba dema mune yedu galaxy
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 1 zuva .
Makore matatu apfuura, nharaunda yesainzi yeChiitiko Horizon Telescope (EHT) yakashamisa nyika nemufananidzo wekutanga we…
Gomba dema rinonzwika sei?
Gomba dema riri pakati pePerseus galaxy cluster rave richibatanidzwa neruzha kubvira 2003…
Stephen Hawking, Yuri Milner naMark Zuckerberg vari kutungamira bhodhi revatungamiriri kune chirongwa chitsva chinodaidzwa kuti Breakthrough Starsshot, ine ...
chii chinonzi orbit
Kana tichitaura nezvenyeredzi, solar system nemapuraneti, tinogara tichitaura nezve orbit. Nekudaro, hazvisi zvese…
chii chinonzi nyika
Isu tinogara pane imwe nyika iri mukati mesolar system, iyo yakakomberedzwa nevamwe...
teresikopu inoshanda sei
Teresikopu chinhu chakagadzirwa chakashandura ruzivo rwezvenyeredzi munhoroondo yese. Kushandisa iyo…
Sei tichigara tichiona divi rimwechete remwedzi?
Isu tese tinoziva kuti Mwedzi unogara uchitiratidza chiso chakafanana, kureva kuti, kubva kuPasi isu hatigone…
Tinoziva kuti pasi redu rine marudzi akawanda e solar system motion. Imwe yeakanyanya kukosha uye iyo iyo…
Pahusiku hwechirimo uye kutanga kwezhizha, chero ani zvake ari muPasi rekuchamhembe kwehemisphere anozoona ...
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 5 mwedzi .
Madutu ezuva zviitiko zvinowanzoitika pazuva nguva nenguva. Ivo kazhinji vari periodic uye ...
Isu tinoziva kuti solar system haipere zvakananga kana tapfuura orbit yePluto….
Kufamba kwepasi: kutenderera, kushandura, precession uye nutation
Iyo Panspermia dzidziso chii chinonzi mavambo ehupenyu?
Big Bang Dzidziso
Lunar karenda 2018